Life Formula - Формула Жизни - נוסחת חיים - languages nepali
माफ गर्नुहोस्, तर त्यो स्वचालित अनुवाद हो। जो कोहीलाई अहिले यो सूचनाको आवश्यक पर्दछ, हामी यसलाई 70 भाषाहरूमा अनुवाद गरिरहेका छौं। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ अंग्रेजीमा प्रमाणित र पूर्ण जानकारी पढ्न सक्नुहुन्छ।
अद्वितीय ध्यान उपकरण र कार्यक्रम
हामी यो सूचित गर्न पाउँदा खुसी छौं कि १० बर्षको कडा परिश्रम पछि, हामीले एउटा अद्वितीय उपकरण र प्रोग्राम सिर्जना गरेका छौं जुन सम्पूर्ण संसारले मद्दत गर्न सक्छ!
केवल केहि शब्दहरू बोलेर र इजाजतपत्रमा एक बटन थिचेर, तपाईं प्रायः।
उपकरण परीक्षणको अधिकार पैसा वा वित्तीय डेटाको भुक्तानी बिना एक हप्ताको लागि प्रदान गरिएको छ।
त्यसकारण, यदि सुरुमा यो उपकरण तपाईलाई धेरै अनौंठो वा अवास्तविक पनि लाग्दछ, यस अवसरलाई नहटाउनुहोस्!
कार्यक्रमको प्रयोगको पहिलो हप्ताको अन्त्यमा, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई तल सूचित शुल्कको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
स्वास्थ्यको सुधारका लागि, व्यक्तित्वको विकास, सकरात्मक उर्जासँग जोड्न र ब्रह्माण्डसँग सद्भाव सिर्जना गर्नका लागि:
आराम गरी बस्नुहोस् र भन्नुहोस्: म माथिको इजाजतपत्रको बिन्दु १ र २ मा लेखिएको कुरा स्वीकार गर्दछु। त्यस पछि, तपाईले यो इजाजतपत्रमा ठूलो दायाँ बटन छुनु पर्छ। र त्यस पछि तपाईले 13 मिनेट को लागी बस्नु पर्छ।
यस उपकरणको प्रयोगको पहिलो समयमा तपाईले -3०--35 मिनेट कुर्नु पर्छ, र ठूलो गिलास पानी पिउन। यो पहिलो प्रयोग पछि तपाईले कडा परिश्रम गर्नुबाट जोगिनु पर्छ र २- hours घण्टाको लागि कारको द्रुत ड्राइभि fromबाट अलग रहनु पर्छ।
यदि तपाई उपचारका लागि ध्यान गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाई तल यी ध्यानहरू पढ्न सक्नुहुन्छ (यी उपकरण र कार्यक्रमको वर्णन पछि)।